जानिराखौं महिलाको स्तनबारे रोचक तथ्य
महिलाको स्तनबारे रोचक तथ्य
23600 पटक पढिएको
पुरुष महिलाको बक्षस्थलप्रति सँधै चनाखो हुन्छन् । पुरुष मात्र होइन महिलालाई पनि आफ्नो बक्षस्थलबारे सँधै चिन्ता र चासो हुन्छ । महिला र पुरुष दुवैलाई चासो हुने महिला अंग हो बक्षस्थल । धेरैलाई थाहा पनि नहुन सक्छ बक्षस्थल कति किसिमको हुन्छ ? धेरैलाई जिज्ञासा पनि होलान् महिलाको आकार स्तनको किन फरक फरक हुन्छ ? कति को त प्रश्न पनि होला किन महिलाको मात्र बक्षस्थल हुन्छ, पुरुषको किन हुँदैन ? तर, स्तन र निप्पल पुषको पनि हुन्छ । कुनै कुनै पुरुषको स्पस्ट देखिन्छ । कुनै को सामान्य नै हुन्छ । कतिलाई पत्यार नलाग्ला शुरुमा सबै भ्रुण केटीनै हुन्छ भन्दा । तर, यो सत्य हो । गर्भावस्थाको ६ हप्ता पछि मात्र टेस्टोस्टरनका कारण लिङ्ग छुट्टिन शुरु गर्छ ।
स्तनको बारे रोचक तथ्य संकलन गरिएको छ ।
-महिलाका दुइ स्तन मध्ये दुवै बराबर कसैको पनि हुँदैन । दुई स्तन मध्ये एउटा ठूलो र एउटा सानो हुन्छ ।
-स्तनको आकार प्राकृतिकरुपमा नै बढाउन सकिन्छ । यसका लागि कुनै कस्मेटिक सर्जरी गर्नु पर्ने वा अन्य मद्दत लिन जरुरी छैन । गर्भवती भएपछि स्तनको आकार आफै बढ्छ र केही खुल्ला पनि हुन्छन् ।
-तपाइँलाई अचम्म लाग्न सक्छ स्तनको आकार आफै ठूलो र सानो भैरहन्छ । खासमा शरीरमा हुने हर्मोनको परिवर्तनले यस्तो हुने गर्छ । महिनाबारी हुनु अघि महिलाको स्तनको आकार बढ्छ र केही दिनमा भने सामान्य आकारमै फर्किन्छ ।
-एक अध्यनका अनुसार महिलालाई भेट्दा २० प्रतिशत पुरुषले मात्र अनुहार हेर्छन् बाँकी ८० प्रतिशतले स्तनमा आँखा पुर्‍याउँछन् । रमाइलो कुरा के छ भने कुनै पनि महिलाको स्तन १० मिनेट सम्म हेर्दा पुरुषको शरीरमा आधा घण्टा सम्म शारीरिक अभ्यास गरेको जति उर्जा पैदा हुन्छ ।
-यदि महिला घोप्टो परेर सुतेमा उनीहरुको स्तनको आकारमा प्रभाव पर्न सक्छ । महिलाहरुलाई सके सम्म घोप्टो परेर नसुत्न र सुत्नै परे स्तन भन्दा तल सिरानी राखेर सुत्न चिकित्सकहरु सल्लाह दिन्छन् । सुत्ने समयमा ब्रा नलगाएको राम्रो हुन्छ । लगाउनै परे अलि खुकुलो ब्रा लगाउन चिकित्सकहरु सल्लाह दिन्छन् ।
-संसारमा सबैभन्दा ठूला स्तन अमेरिकाको टेक्ससमा बस्ने ३४ वर्षीया मोडल शेला हर्शलका छन् । उनले आफ्नो स्तनलाई ९ पटक सर्जरी गरेर घडप्प्प् बनाएकी छिन् ।
-प्राकृतिकरुपमा नै सबैभन्दा ठूला स्तन भएकी महिला भने एनी हकिङ्स टर्नर हुन् । उनको नाममा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड समेत बनेको छ ।
-कतिपय महिलालाई स्तनको टुप्पो अर्थात निप्पल चलाएकै भरमा यौनिक चरमोत्कर्षको अनुभव समेत हुन्छ ।
-कतिपय पुरुषका समेत स्तन र निप्पल प्रष्ट देखिन्छ । किन भने शुरुमा सबै भ्रुण शुरुमा केटी नै हुन्छन् । गर्भावस्थाको ६ हप्ता पछि मात्र टेस्टोस्टरनका कारण लिङ्ग छुट्टिन शुरु गर्छ । त्यतिबेलासम्म स्तन र निप्पलको आकार बनिसकेको हुन्छ ।
-महिला स्तनमा निप्पल ८ प्रकारका हुन्छन्ः सामान्य, फ्ल्याट, पफी, इन्भर्टेड तथा एक्ट्रोभर्टेड इत्यादि ।-एजेन्सीको सहयोगमा